के तपाइला पिसाब चुहिने समस्या छ ? हेर्नुहोस समाधानका उपायहरु ! – Samacharpati
के तपाइला पिसाब चुहिने समस्या छ ? हेर्नुहोस समाधानका उपायहरु !
पाेखरा, २७ माघ । अनियन्त्रित रुपमा पिसाब चुहिने वा नथामिने समस्यालार्ई चिकित्सकीय भाषामा युरिनरी इन्कन्टिनेन्स भनिन्छ। यो एउटा रोग होइन तर यस्तो समस्या हो, जसले हाम्रो दैनिक कार्यमा अप्ठेरोेपना ल्याइदिन्छ र सामाजिक कार्यक्रममा भाग लिनसमेत बञ्चित गराउँछ। विश्वभरि १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथि उमेर भएकाहरुमा पिसाब चुहिने समस्या देखिएको पाइन्छ र पुरुषको दाँजोमा महिलामा यो समस्या बढी हुन्छ।
पेटमा बल लाग्ने कुनै पनि कार्य गर्दा यदि पिसाब चुहिन्छ भने त्यो समस्यालाई स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भनिन्छ। सबैभन्दा बढी मात्रामा देखिने पिसाब चुहिने प्रकार नै स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स हो। पिसाब थैलीबाट योनीसम्म एउटा नली हुन्छ, जसलाई युरेथ्रा भनिन्छ। कम्मर भित्रको मांसपेसी अर्थात् पेल्विक फ्लोर मांसपेसी कमजोर वा खुकुलो भयो भने युरेथ्रालाई राम्ररी बन्द गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा हाँस्दा, उफ्रँदा वा भारी समान उचाल्दा पिसाब थैलीमा जोर पर्छ र पिसाब चुहिन्छ।
कतिपय व्यक्तिहरुमा भने दुवै प्रकारको पिसाब चुहिने समस्या देखिन्छ। निम्न रोग वा अवस्थामा पिसाब चुहिने समस्या बढी देखिन्छः बढ्दो उमेर , वंशानुगत , गर्भावस्था, योनीद्वारा प्रसूति, पाठेघर निकालेपछि रजस्वला रोकिएपछि , मोटोपना स्नायु वा नशा रोग , मधुमेह, पिसाबको संक्रमण, आन्द्राका रोगहरु यसका रोकथाम का उपायहरु कस्ता छन् त ! हेर्नुहोस् भिडियो
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल्न राष्ट्रिय फुटलब टोली म्यान्मातर्फ